XOG XASAASI: Maxaad ka Ogtahay Sababta ay Puntland Xabsiga u dhigtay mas’uul ka tirsan Somaliland?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaad ka Ogtahay Sababta ay Puntland Xabsiga u dhigtay mas’uul...
Garoowe (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya degmada Badhan ee gobolka Sanaag, ayaa sheegaya, in ciidamada dowlad goboleedka Puntland ay maanta xabsiga dhigeen guddoomiye ku-xigeenka Somaliland u qaabilsan degmadaasi.
Cabdi-raxmaan Axmed Muuse (Suldaan Suus) ayaa ciidamada Puntland waxay xireen kadib markii uu ka dhago adeygay baaqyo kala duwan oo maamulkooda ugu soo jeediyen in uu ku biiro, isla markaana iska casilo xilka uu Somaliland u hayo, sidii ay hore ugu biireen maamulka Puntland Guddoomiyihii degmadaasi.
Dowladda Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ku howlaneed qorsho ay Mas’uuliyiinta deegaannada ay isku hayaan Somaliland kula soo wareegayaan, taasi oo muddooyinkii dambe sare u qaaday madaxda ka soo goosatay dhanka Somaliland.
Si kastaba, guddoomiyihii magaalada Badhan iyo Taliyihii ciidamada Somaliland ee aaga Badhan, ayaa hore ugu biirey dowlad goboleedka Puntland, kuwaasoo kordhinayey tirada madaxda ka soo goosatay Somalilad.
xabsiga dhigtay mas'uul Somaliland